Tsy azo ihodivirana intsony: miray feo avokoa ny rehetra ny hirosoana amin’ny fifidianana | NewsMada
Tsy azo ihodivirana intsony: miray feo avokoa ny rehetra ny hirosoana amin’ny fifidianana
Na ny eto an-toerana, na ny avy amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena, efa samy miombom-peo ny amin’ny tokony hirosoana amin’ny fifidianana. Mazava ny voalazan’ny lalàna sy ny lalàmpanorenana. Tsy tokony hisy intsony ny sakana fa hanefa ny adidiny ny vahoaka malagasy, afaka fito andro.
Nanambara ny teo anivon’ny Ceni fa tsy mitombina avokoa ireo feo miely etsy sy eroa momba ny birao fandatsaham-bato matoatoa, na ny biletà tokana, ambara fa efa vita mialoha. Nampitandrina ny amin’ny tokony hipetrahan’ny fitoniana amin’izao hiatrehana ny fifidianana izao ka tsy hampiroaroa saina ny olom-pirenena. « Aoka tsy hokorontanina ny saim-bahoaka. Raha misy manana porofo fa efa misy biletà tokana efa voatsipika, na biraom-pifidianana (BV) matoatoa na fanampiny, ento aty hiarahana mijery izany. Misy mandroritra etsy sy eroa ny momba izany ka lasa manahirana. Tsy mahasoa ny firenena ny resaka any ambadika any », hoy izy. Nitondrany fanazavana koa ny antony tsy namalian’ny Ceni ny fanasan’ireo kandidà 17 tamin’ilay ambara fa fihaonambe mahatapaka teny Ivato, herinandro vitsy lasa izay. “Resaka teknika ny anay fa tsy miditra amin’ny politika ka tsy misy antony handehananay eny. Tsy anjaranay mihitsy ny miditra amin’izany”, hoy ihany ny filohan’ny Ceni.
Tsy maintsy voasonian’ny mpikamban’ny birao fandatsaham-bato…
Etsy andaniny, afaka mifidy ireo tsy manana kara-pifidianana, saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra rehetra, araka ny nambaran’ity rafitra mikarakara ny fifidianana ity. “Tsy maintsy maka fanamarinana eny anivon’ny fokontany milaza fa voasoratra anaty lisi-pifidianana ireo tsy manana kara-pifidianana. Tsy maintsy ampiasaina sy entina kosa anefa ny kara-panondrom-pirenena, na ny fahazoan-dalana hamily na koa ny pasipaoro fitondra mandeha mivoaka any ivelany”, hoy izy ireo.
Tsy iadian-kevitra intsony ny hirosoana amin’ny fifidianana
Mazava ny hafatry ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery. “Tsy iadian-kevitra ny hirosoana amin’ny fifidianana. Aoka ho tonga maro isika amin’ny fifidianana”, hoy izy. Notsiahiviny ireo dingana efa natao hatramin’ny roa taona nahatongavana amin’izao fifidianana izao. Tsiahivina fa efa nampahafantarina ampahibemaso, omaly ilay “logiciel” hikirakirana ny fifidianana, indrindra fa ny voka-pifidianana. Niteraka resabe ny momba izany ary nametrahan’ny maro ahiahy, saingy izao naseho sy nokirakiraina eo anatrehan’ny rehetra izao. Nohazavaina tamin’izany ny dingana rehetra amin’ny voka-pifidianana, toy ny famoahana izany miainga isaky ny birao fandatsaham-bato ka hatreny amin’ny foiben’ny Ceni.